Ọrịre na-ekpo ọkụ
Anya ebuli wand
Ngwa nhicha ihu
Galvanic ihu Massager
Kedu ka esi eme nlekọta anụ ahụ tupu na mgbe mgbatị ahụ gasịrị?
A na-ekwu na "ndụ dị na mgbatị ahụ", na uru ndị mmega ahụ na-eweta na-apụta ìhè n'onwe ya.Ma ọ na-eme ka ọnọdụ kwụ ọtọ ka mma, ịlalata ibu, ma ọ bụ na-akwalite mgbasa nke metabolic, ha niile bụ uru mmega ahụ na-eweta.Maka ụmụ agbọghọ, mmega ahụ dịkwa oke mkpa, mana ụmụ agbọghọ ga-abụrịrị ...
Ngwa ụlọ mara mma ọ na-eme ugboro ugboro ọ dị mma?
Ngwa mma mma ugboro redio nwere ụfọdụ myirịta na oven microwave.Anyị niile maara na ngwa ndakwa nri oven na-ekpo ọkụ nri site na ikpo ọkụ.Teknụzụ ịma mma RF na-ejikwa ụkpụrụ a.Ọ nwere ike banye n'ime epidermis, rute dermis ma rụọ ọrụ na mkpụrụ ndụ mmiri dị n'ime collagen ...
Kedu ihe kpatara ụra ji dị mkpa maka ịma mma ihu?
Ihe dị ka 1/3 nke ndụ mmadụ na-eji ụra.Mmekọrịta dị n'etiti ụra na ịma mma dị ezigbo nso.Otu n'ime isi ihe ngosi nke ịka nká mmadụ bụ ihu.Ọ bụrụ na ị naghị ehi ụra nke ọma, akpụkpọ ahụ ga-akpọnwụ nke ukwuu, na-agwụ ike, na ọbụna wrinkled, akpụkpọ anụ adịghị mma, ihe otutu, ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ...
RF anya ịhịa aka n'ahụ mwepu na-arụ ọrụ mode
site admin na 22-03-03
Ngwa mma anya a na-ejikọta ugboro redio, ịma jijiji dị elu na ọgwụgwọ ọkụ uhie.Enwere ike iji ya na ude anya na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ ndị ọzọ na-eme ka akpụkpọ ahụ dị n'akụkụ anya sie ike ma na-agbanwe.Nhazi pụrụ iche, nha obere ibu, ọrụ bọtịnụ abụọ, ụdị ọrụ anọ, nwere ike weta com ...
Ọrụ na atụmatụ nke mkpịrị wrinkle anya
Anya ịhịa aka n'ahụ na-ejikọta EMS na ịma jijiji ugboro ugboro emebere maka mbelata nhụsianya anya na imegharị anya.Ọrụ: ① EMS (Electric Muscle Stimulation) nwere ike ime ka mkpụrụ ndụ akpụkpọ ahụ rụọ ọrụ, kpalie mmụgharị collagen, mee ka mọzụlụ dị ike na akpụkpọ ahụ na-agbanwe.② Igwe ebili mmiri na-emegharị anya...
Kedu ihe onye ịhịa aka n'ahụ na-eme?
site admin na 22-02-23
1. Mma freckle / activation nke anya akpụkpọ Ọ bụrụ na ị nwere ike ịhịa aka n'ahụ karịa 20 acupoints dị ka "azụ n'úkwù", "silk bamboo", "chengxi", wdg na anya ebe, ọ nwere ike iwusi metabolism nke anya cell, gbochie. akpụkpọ ịka nká na mmebi, na-eme ka anya akpụkpọ anụ ...
Otu esi ejikwa anya ịhịa aka n'ahụ
site admin na 22-02-22
1. Mgbe waya na-ekpo ọkụ ma oghere ahụ tọgbọrọ chakoo, biko kwụsịtụ iji ihe eji eme ihe;2. Edokwala ya n'ebe ọ dị mfe iburu mmiri, dị ka ebe a na-asa ákwà;3. Ejila ihe eji eme ihe na mmiri;4. A naghị ekwe ka ịdebe ngwá ọrụ n'okpuru ọnọdụ ike;5. Na o...
Ànyị kwesịrị iji ahịhịa na-ehicha ihe?Kedu ihe bụ ahịhịa na-ehicha ihe?
Mgbe ụfọdụ, naanị ịsa aka ezughị.Site na mmepe nke teknụzụ, ewebata brush na-ehicha ihu sonic, nke na-enyere ndị mmadụ aka ime ka akpụkpọ ahụ dị ọcha nke ukwuu site na mkpọtụ sonic ugboro ugboro.M ga-ahọrọ ahịhịa na-ehicha ihe ma ọ bụ ihe nchacha?Nke a bụ nsogbu f...
Kedu ka esi ejigide ngwa mma ahụ?
Dị ka ihe ịchọ mma na-abanye n'ime ọtụtụ puku ezinụlọ, anyị ekwesịghị ichefu ịnọgide na-eji ngwá ọrụ mara mma mgbe ị na-ama mma, ka e wee jiri ihe ịchọ mma mee ihe ogologo oge.N'okpuru bụ ndụmọdụ ole na ole maka enyemaka.1. Akụrụngwa mara mma bụ ngwaahịa eletrọnịkị nkenke.Ọ sho...
Aro isii iji kwalite akpụkpọ ojii
Enwere iri puku kwuru iri puku pores na ihu.Ọkwa pores na-adịgasị iche n'etiti ndị mmadụ dị iche n'ihi ọdịiche dị na usoro nlekọta anụ ahụ na ahụ nke onye ọ bụla.Ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe pores siri ike na oke mmiri na-ezo mmanụ, nke nwere ike ime ka pores gbachie.Mgbe ụfọdụ, a ga-enwe ọtụtụ bl...
Kedu ka esi egbochi egbugbere ọnụ na-akpọ nkụ na ịpụpụ?
Akpụkpọ anụ bụ akụkụ kasị ukwuu nke ahụ mmadụ, na egbugbere ọnụ, dị ka ihe na-egbuke egbuke nke akpụkpọ anụ mucous nke ahụ dum, na-enwekarị mmetụta maka mkpali na mmetụta nke gburugburu ebe obibi na metabolism na ahụ.Kedu ihe na-ebute egbugbere ọnụ kpọrọ nkụ na bee?Keratin dị na ndị ọzọ ...
Kedu ihe bụ yist na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ?
N'oge a, enwere ọtụtụ ihe na ngwaahịa nlekọta anụ ahụ, nke na-ekwupụta ọrụ mgbochi ịka nká.Yist a na-ahụkarị n'ọtụtụ ụdị, Ma gịnị ka ọ bụ na otú ọ ga-esi nyere aka?Ka anyị lelee ma hụ taa.Yist bụ ụdị ero.Yist na nlekọta anụ ahụ anaghị ezo aka na yist n'onwe ya, kama ọ bụ ihe na-emepụta ...